I-Mega-ukuthandwa kwesiqwenga seqela elithi "Leningrad" kwingoma ethi "Umboniso" wakhuthaza uSergei Shnurov kunye neqela lakhe ukudala ubugcisa obutsha. Umculi, ezama ukuphinda impumelelo yevidyo kliphu malunga neLatuteny, wagqiba ekubeni athembele kumlawuli we-Anna Parmas.
Njengesixhobo esitsha sevidiyo, ukhetho lukhethiweyo, elinye igama elikude limi ngokulindeleke kakhulu - "Iititi".
Iqosha elitsha laliyilo hlobo lokuqhubeka "loMboniso" kuba enye yama heroines endalini yayinguJulia Topolnitskaya, owawunqoba abaphulaphuli ngeentlungu zakhe kunye ne-labutenas engalibalekiyo. Kwividiyo entsha yeqela elithi "Leningrad" i-Topolnitskaya ayisayikhathazeka malunga nomcimbi wokukhetha usuku lomhla. Ngaphezu koko, yonke into ishintshile ebomini bakhe - umlenze waseLatuten usekulungele ukuba ngumama. Ngoku le ntombazana ixhalabele ngomphumo womhlobo wakhe, onobuhlobo obungazange banikezele ngokukhawuleza okukhulu.
Kwiqhotyoshelweyo "iiTits" zatshengisa uVladimir Putin
Kufanelekile ukuhlawula umbulelo we-Anna Parmas, ovela kwingoma entsha ethi "Leningrad" wenza enye ingcweti. Ngeentsuku ezingaphelelanga, iindaba zakutsha zijikeleze imidiya yasekhaya kwaye ividyo sele ifumene imibono engaphezu kwezigidi eziyi-1.4! Kwinqanaba lebali ibali leentombazana ezincinciweyo, ezithe zafumana umthandi wakhe embhedeni kunye nomlingani ophethe amabele e-chic.
Umqondisi wevidiyo ngokubambisene nayo eya kudalwa kwimilodrama emitsha yomculo, ekwazi ukuyibeka kwiinyembezi kunye nemibutho, nothando olutsha, "ukuhlwa kwangasese", nangona ... Vladimir Putin. Yintoni efikile kuyo yonke le nto, nikela ababhalisi bethu ngoku kwaye sibone:
U-Ksenia Borodina ngokokuqala ngqa wamkela ukuba uqhawule umtshato ku-Kurban Omarov
Umdlalo "Izwi" 5 iqalisa ukuqala: ukuqala kokuqala, iifoto kunye nevidiyo
Imilenze yenkukhu ekubetheni
Ukuqulunqwa kwamashishini: kufuneka ibe yintoni kunye nendlela yokwenza ngayo